Iindaba -Izixhobo zeMoto eziGadiweyo zeVs neeGearless Hub Motors
Injini eqhuba ngqo yokuqhuba ngokuthe ngqo
Zimbini iintlobo eziphambili zee-motors ze-hub okwangoku kwimarike: ii-motors ze-hub ezingenagiya (ii-motor hub hub zibizwa ngokuba zii “motor drive” zeemoto). Ngenxa yokunqongophala kweegiya, ii-motor hub eziqhuba ngokuthe ngqo zilula kwezi zimbini, ke siza kuqala ngazo.
I-gearless (i-drive ngqo) i-hub motors
Kwi-motor drive ye-hub ethe ngqo, i-asi edlula embindini weemoto ngenene yi-asi yemoto ngokwayo, kunye nokujijelwa kobhedu okulungiselelwe i-asi. Le ndibano yonke ye-asi ibizwa ngokuba yi "stator". Iimagnethi zixhonywe kwigobolondo langaphandle lemoto yehabhu. Xa kufakwa umbane kwi-stator kukhutshelwa umazibuthe obangela ukuba iimagnethi zihambe. Oku kwenza ukuba yonke iqokobhe leemoto lijike kwaye liqhubele phambili i-ebike ngaphambili.
Ngaphakathi kwimoto yehabhu eqhuba ngqo engenazingcingo
Iimoto zehabhu ezilungiselelwe
Ngakolunye uhlangothi, ii-motors zehabhu ezilungiselelwe, zinamatyala azo aqhagamshelwe kwi-stator ngenkqubo yokunciphisa izixhobo zeplanethi. Ngalo lonke ujikelezo lwetyala, iimoto ngaphakathi zijika ngokukhawuleza amaxesha amaninzi. Oku kuvumela iimoto ukuba zisebenze ngesantya esiphezulu kunye nokusebenza ngakumbi, ngelixa ivumela ivili ukuba lijikeleze ngesantya esincinci sokuqhuba.
Zithelekiswa njani ii-motors zehabhu ezingenazigiya?
Iimoto eziqhuba ngokuthe ngqo ziyakwazi ukubonelela ngexabiso elikhulu le-torque kunye namandla. Oku kubenza ukuba balungele ngokukodwa ukusebenza okuphezulu kweebikes. Iimoto eziqhuba ngokuthe ngqo zihlala zikhulu kwaye zinzima ezongeza kubunzima bebhayisikile ngokubanzi kwaye zinciphise uluhlu. Kwicala elingaphezulu, obu bunzima bongezelelekileyo bunceda iimoto ukuba zingagqithisi ubushushu ngokulula kuba ubunzima obushushu beemoto busebenza njengesinki yokufudumeza.
Umsebenzi wokukhanya oqhuba ngokuthe ngqo kwi-hub motors, njengoninzi olufumaneka kwi-eBay nakwezinye iisayithi zefandesi, zihlala zilinganisiwe kwii-watts ezingama-500 kodwa zihlala ziqhutywa ngokukhuselekileyo ukuya kuthi ga kwi-watts ezili-1 000. Iimoto ezinkulu zokuqhuba ngokuthe ngqo, ezinje ngee-Continental ze-hub ze-hub motors, zihlala zilinganisiwe kwii-watts ezili-1 kodwa zinokuphatha amanqanaba aphezulu ombane.
Iimoto zehabhu ezenzelwe zona zincinci kwaye zikhaphukhaphu kuneemoto eziqhuba ngokuthe ngqo, ezinokukunceda ngokwandisa uluhlu, kodwa azinamandla kangako kwaye zinokuphela ngokukhawuleza. Uninzi lwee-motors ze-hub ezilungiselelwe zilinganiswe kuphela ukuya kuma-watts ama-350 wamandla, nangona i-motor enkulu ye-Bafang BPM ejolise kwi-hub yeemoto ine-watts ezingama-500 kwaye isetyenziswe ngempumelelo kwii-ebikes ukuya kuthi ga kwi-watts ezili-1, nangona ixesha elifutshane lokuphila (le Imoto leyo, hayi umkhweli).
Abanye abantu baye baphumelela ekunyuseni ixesha leeplastiki ngaphakathi kweemoto ze-hub ngokulungisa enye yeeplanethi zeeplanethi kunye nezixhobo zentsimbi. Oku kuvumela izixhobo zentsimbi ukuba zithathe uxinzelelo loxinzelelo, ukugcina ezinye izixhobo zeplastiki kunye nokwandisa ubomi obunokusetyenziswa kweemoto zehabhu. Oku ngokubanzi kwenza ukuba imoto iphakamise ngakumbi-nangona oku kunqabile ukuba kube sisaphuli-mthetho.
Iiplastikhi ezintathu zokuhambisa amandla ngaphakathi kwemoto yehabhu ejolise kuyo
Ukukhetha phakathi kwe-motor ye-hub okanye ye-drive eqhuba ngokuthe ngqo kuyehla kuye kuqwalaselwa ezimbini: amandla akho kunye neemfuno zobunzima. Ukuba ucinga ngebhayisekile yakho yombane ngoseto olunobunzima engqondweni, umncinci kakhulu umda kwimoto yehabhu ejolise kuyo. Ukuba ufuna i-ebike enamandla, ngakumbi i-ebike ngaphezulu kwe-1000 watts, olona khetho lwakho kukuqhuba ngqo kwe-hub yeemoto.